Muchina maficha: 1. Brand nyowani yekuEurope dhizaini dhizaini nekumhanyisa kumhanya, yakakwira kunyatsoita uye yakakwira kuomarara 2. Iyo furemu yakasungirirwa ne-yakasimba-simbi simbi, ine yepamusoro kugadzikana uye hwakareba hupenyu 3. Uchishandisa yazvino servo pombi tekinoroji, shanda pane zvinoda, kuchengetedza magetsi uye mafuta 4. Iyo ine hushamwari hwevanhu-komputa yekudyidzana nharaunda, yakakwira kutonga kwakaringana uye yakareruka zvirongwa 5. Uchishandisa yakakosha yepamusoro-chaiyo muripo webhenji, chigadzirwa chacho chakanyanya kugadzikana Machine paramende se ...
Nonstick pani Frying pani Cold yekugadzira hydraulic muchina
5000T inotonhora yekugadzira hydraulic yekudhinda, inonyanya kushandiswa induction yepasi hari, isiri-tsvimbo hari. Pasi pekumanikidzwa, pinda simbi mbiri pamwechete. Iyo hari-yepasi poto inosangana neiyo sosi sosi yekupisa uye inoendesa kupisa nekukurumidza, izvo zvinogona kuita kupisa uye kupisa kwekuparadzira yunifomu. Rukoko mukati mehari rwuri rwakatsetseka, rwunopfeka zvinodzivirira, kwete nyore kuita ngura, uye haruzobudise makomputa anokuvadza kuhutano hwevanhu
Kupisa kupisa kunoitwa pamusoro pesimbi tembiricha yekudzokorodza. Kuwedzera tembiricha kunogona kusimudzira mapurasitiki esimbi, zvinoenderana nekuvandudza mhando yemukati pebasa uye ichiita kuti zviome kutsemuka. Kupisa kwepamusoro kunogona zvakare kudzora kushomeka kwekushomeka kwesimbi uye kudzikisa hureni hwekugadzira michina inodiwa.
Yedu hydraulic yekudhinda muchina akakodzera hwakawanda zvinhu kuumbwa:
SMC (Sheet Rakaumba Chikamu) zvikamu
BMC (Bulk Kuumba Mukomboni) zvikamu
RTM (Resin Kutamisa Kuumbwa) zvikamu
Maitiro akasiyana anoshandiswa, zvinoenderana nezvinodiwa pachinhu uye negadziriro yekugadzira. Mhedzisiro yacho: Zvakanakisa zvikamu zvemhando yepamusoro uye zvakawandisa kugadzirwa kwekuvimbika - kune hukuru hwehupfumi pamwe nekuwanda kwehuwandu.
Upfu hwesimbi hydraulic wokudhinda anonziwo yakaoma upfu achiumba hydraulic wokudhinda. Iyi nhevedzano yemagetsi ekudhinda anonyanya kuita hydraulic, nekukurumidza kugadzira, kuderera kwesimba kushandiswa, yunifomu yechigadzirwa chigadzirwa uye simba rakanaka.
ZHENGXI HYDRAULIC yakasarudzika dhizaini iyo Yz 79 hydraulic yekudhinda yeSALT BLOCKS. Muchina wedu unoratidzirwa nekushanda kwakadzikama uye nekukurumidza kumhanya, uko kunogona kusvika kune imwechete kutenderera kwemasekondi gumi neshanu, uye izvo zvishandiso zvinoshandiswa nemushini zvinogona kuramba zvichirwisa kuora. Iyo yakakodzera kugadzirwa kwakawanda kwematombo emunyu
musuo nekusimbisa, nebefu muchina
Muchina uyu unonyanya kukodzera simbi musuo nekusimbisa, nebefu. Iyo michina ine yakanaka system kuomarara uye yakakwira kunyatsoita, hwakareba hupenyu uye hwakanyanya kuvimbika. Iyo embossing maitiro eshiti simbi zvikamu zvinosangana nematanhatu mashifiti / zuva kugadzirwa ..
Otomatiki SMC Kugadzira Line SMC muchina jira kuumbwa komponi
1.Iyo control system inodzorwa ne PLC chirongwa, icho chinogona kuona otomatiki kurodha.
2.Iri resin inotanga kuiswa mukati maererano nehuwandu hwemafomula yakatarwa nechirongwa, uye rinomiswa zvoga kana huwandu hwefomula hwasvika, uye hwobva hwangomira kana iyo yakaderera shrinkage mumiririri yaiswa muyero yefomula.
Muchina uyu kunyanya inokodzera chinoumba zvinhu Kuumbwa; iyo michina ine yakanaka system kuomarara uye yakakwira kunyatsoita, hupenyu hwepamusoro uye hwakavimbika hwakareba. Maitiro ekudhinda anopisa anogadzira matatu mashifts / kugadzirwa kwezuva.